Fikarakarana fifidianana : nilaza ho afaka mitondra fanitsiana lalàna ny Ceni | NewsMada
Ho hita eo indray amin’ny fifidianana eo anivon’ny faritra sy ny faritany. « Afaka mitondra volavolam-panitsiana ny lalàna momba ny fifidianana izahay raha toa ka ilaina izany », hoy ny filohan’ny Ceni, ny mpisolovava Rakotomanana Hery, omaly tetsy Alarobia. Niteraka olana tamin’ireo fifidianana natao niarahana amin’ny Cenit teo aloha, ary mbola nodimbiasan’ny Ceni amin’izao fotoana izao ity resaka lalàna ity.
Niovaova am-pandehanana izany tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna, nanomezana vahana antokon’ny fanjakana ? Nitohy indray koa tamin’ny resaka birao fandatsaham-bato isaky ny kaominina natao eny anivon’ny distrika izany tamin’ny fifidianana loholona farany teo. Maro ireo tsy nankasitraka izany, hatramin’ny firaisamonina sivily sy ny antoko na mpanao politika. Niaraha-nahita ny vokany. Marobe ireo fitarainana sy fitoriana tonga eny amin’ny HCC… Tsy azo hamavainina fotsiny amin’ny hoe fomban’ny resy izany satria maro ireo porofo samihafa. Mbola ho tahaka izany hatrany ? Efa niaiky ny mpitsara eo anivon’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakan (Taf) etsy Anosy tamin’ireny famoahana voka-pifidianana ben’ny Tanàna ireny fa mandringa ny lalàm-pifidianana ary hita ny tsy fahatomombanany.
Hatao amin’ny faran’ny avrily ny fifidianana
Etsy andaniny, na tsy mbola nambara aza ny fotoana hanaovana ny fifidianana ny mpanolontsaim-paritra sy ny filohan’ny faritra, nilaza ho efa miomana amin’izany ny Ceni. Anjaran’izy ireo anefa ny mamolavola ny daty sy manolotra izany amin’ny governemanta. Hiandrasana an’iza sa hatao ny faran’ny volana avrily na fiandohan’ny mey izao ? « Dingana manaraka ireo fifidianana ireo. Mbola sarotra anefa ny hoenti-manana. Mialoha izany, mbola hanao tatitry ny fifidianana loholona izahay », hoy ihany ny Ceni.
Ankoatra izany, nilaza hampangarahara ny asany tanteraka, indrindra ny resaka ara-bola, ny eny Alarobia. Eo rahateo ny fivoriambe efa fanaon’izy ireo.
Tsiahivina fa tontosa, omaly raha efa tokony ho natao tamin’ny herinandro teo, ny famindram-pitantanana eo amin’ny Cenit teo aloha, notarihin-dRalaiariliva Mamy Ndriana sy ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery. Naneho fahavononana ny hanatsara ny vitan’ny teo aloha ny amin’izao fotoana izao.